भिडियो – RaptiSandesh
प्लस टु पढ्न गुरुकुल नै किन रोज्ने ?
घोराही, ५ असार गुरुकुल एकेडेमी घोराही दाङले चालू शैक्षिक वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्दैछ । जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षण संस्था रुपमा स्थापित गुरुकुल एकेडेमीले विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्कायमा कक्षा ...
दाङ, ८ साउन । हाँस्य कलाकार कमल गाउँलेले नयाँ गाईजात्रा के के हुने हो ? को भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । उनको यो २०औँ गाईजात्रा हो । उनले बजारमा ल्याएको ...
दाङ,७ साउन । गायक तथा मोडेल कृष्ण रेउले र रीता केसीले स्वार दिएको झम–झम दर्कियो झरी…तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण एकदमै कम मात्रमा ...
भक्कानिदै कवितामा सम्झीए योद्धाले जनयुद्ध
घोराही, २८ मंसीर उदाहरण शनिवार घोराहीमा आयोजना गरेको कब्याट कविता कार्यक्रममा जनयुद्धका योद्धाहरुले कविताहरु सुनाएका छन् । जनयुद्धमा जनमुक्ती सेना भएर लडेका योद्धा एवं जनयुद्धलाई विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्न हिडेका ...
पत्रकार केएलले ल्याए सन्देशमूलक तीजगीत (भिडियो)
दाङ, १५ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका पूर्व अध्यक्ष, गीतकार एवं चलचित्र निर्देशक केएल बुढाथोकीले सन्देशमूल तीजगीत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘बनाऔं नयाँ जीवन संस्कृति’ बोलको तीजगीत उनले ...
शिल्पा सुनसंग जोखिने शरद सुनपानीले चोखिने भए पछि प्रेम असफल
दाङ,५ साउन । तिमी सुनसंग जोखिने मान्छे म सुन पानीले चोखिने मान्छे … गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतकार प्रकाश केसीको शब्द, गायक शरद ‘समिप’को स्वर, संगीतकार ज्योति ...
तीजको मौलिकता ‘शिरफूल’
देवेन्द्र बस्नेत दाङ,३ साउन । बजार तताउने सोँचले ब्याप्त नेपाली संगीतको मौलिकता गुम्ने होकि भन्ने प्रश्न संगीत बजारमा उब्जि रहेकै छन् । नेपाली संगीतमा ब्याप्त ‘कपिराईट’ मुद्धाले पनि नेपाली संगितको ...
मोडल टीका जैसीको उत्कृष्ट अभिनयमा मर्मस्पर्सी गीत ‘छोरीको बेदना’ (भिडियो)
दाङ, ७ असार मोडल टीका जैसीले अभिनय गरेको नयाँ म्यूजिक भिडियो लोकप्रीय बनेको छ । जैसीले अभिनय गरेको छोरीको बेदनाले भरिएको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएसँगै लोकप्रीय बन्दै आएको छ ...